Marka DHulka la gilgilo.
Dhulkuna soo bixiyo culaykiisii (wixii ku aasnaa).
Dadkuna (Gaaladuna) dhahaan maxay leedahay.
Maalintaas waxay ka sheekayn warkeeda.
Maxaayeelay Eebaa u waxyooday.
Maalintaas Dadku way soo bixi iyagoo kala tagsan (xagga Diinta iyo Camalkaba) si ay u arkaaan camalkooda.
Ruuxiise wax yaroo khayra fala wuu arki.
Kiise wax yar oo shar fala wuu arki.
Eebe wuxuu ku dhaartay Fardaha Jahaadka u orda iyagoo qaylyi.
iyo kuwa dabka Qoobkooda ku ifiya (guuraha).
Iyo kuwa Cadawga weerara Subaxdii.
Ee Boodhka kiciya.